Ukuveliswa kwe China Mascara kunye neFektri | UWangtong
Amanyathelo achanekileyo okufaka imascara
Izixhobo / izinto eziluhlaza
I-eyelash ukuya cream
Iindlela / iinkqubo
Inyathelo 1: I-curl eyelashes.
Ufuna ukulungelelanisa i-radian ye-eyelash ngokufanelekileyo emva koko, ingakumbi kwintloko yamehlo kunye nokuphelisa iliso kwezi ziphelo zibini, akufuneki ulibale.
Inyathelo 2: ukusetwa kwe-eyelash Okokuqala, isixhobo sombane sisebenza shushu ngaphambili, njalo-njalo emva kwamehlo amnandi, siyakubekwa kwingcambu kunye nasembindini wenkophe, ukuba nje ukuhlala nje imizuzwana emi-2-3 kulungile .
Inyathelo 3: Faka isicelo se-mascara base.
Sebenzisa nje umaleko omncinci wesiseko sokukhusela okanye isikhuseli sokuqhawula ukunciphisa umonakalo kwimivimbo yakho ngexesha lenkqubo yokwenza.
Inyathelo 4: Gxobhoza iinkophe zakho.
Okokuqala, jonga phantsi ukuze ubhence iingcambu zemivimbo yakho kangangoko kunokwenzeka, emva koko faka intloko yebrashi kwiingcambu zeenkophe zakho kwaye uyibambe imizuzwana emibini ukuya kwemithathu. Emva koko tsala intloko yebrashi ngomsila weenkophe zakho. Yenza uhlengahlengiso oluncinci ngelixa i-mascara yakho isomile, ude waneliseke, kwaye uhlambe i-eyelashes yakho ngakumbi.
Inyathelo 5: Gxininisa amehlo kunye nemisila.
Indlela iphambi kokuba i-mascara fluid ingomi, isitshixo se-besmear esinee-eyelash zokuphela kwamehlo, sifuna ukusebenzisa indlela ebonisa ukukhanya kwe-besmear, gxininisa ifuthe lokuphela kwamehlo kukuvumela iliso libukeke likhulu.
Ikhefu le-Comb kamva, xa unokukama ikama kunye ne-eyelash kuphela, unokuvumela ukuba iingcambu ze-eyelash zitshise.
Inyathelo 6: Gxobhoza iinkophe zakho.
Ibrashi phantsi kweenkophe kufuneka ilumke oh, ukuzama ukubeka izandla zakho kancinci, ubuchule kukushukumisa ngobunono kwaye utyhale i-eyelash brush, ungabrasha ukhuphe amashiya amade kwaye atyebileyo.
Qaphela: ukuba iinkophe zebrashi zihlala zixhawula izandla, zinokuthenga iitawuli zamaphepha, zigqume ibrashi, ukuze ukwazi ukunqanda iimpazamo.